October 7, 2020 - Online Hartha
ဘဝမှာ အရှကျရဆုံး နကေို့ ပွောပါဆိုရငျ ဒီနလေို့ ပွောရမယျ…
ဗိုကျဆာလို့ ကြောငျးမှာ လာတောငျးစားနတေဲ့ သူတောငျးစားကို ဘုနျးကွီးက အုတျခဲပုံရှခေိုငျးလိုကျသောအခါ…
ဗိုက်ဆာလို့ ကျောင်းမှာ လာတောင်းစားနေတဲ့ သူတောင်းစားကို ဘုန်းကြီးက အုပ်ခဲပုံရွှေခိုင်းလိုက်သောအခါ… ဗိုက်ဆာလို့ ကျောင်းမှာ လာတောင်းစားနေတဲ့ သူတောင်းစားကို ဘုန်းကြီးက အုပ်ခဲပုံရွှေခိုင်းလိုက်သောအခါမှာ.. တစ်နေ့မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းကို လက်တစ်ဖက်တည်းရှိတဲ့ သူတောင်းစားတစ်ယောက် ရောက်လာပြီး စားစရာလာတောင်း စားတယ် ..အဲ့မှာ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးနဲ့ တိုးတော့ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဆီမှာ စားစရာတောင်းတယ်။ ဆရာတော်က ဆွမ်းစားဆောင်ရှေ့ က အုတ်ပုံကို လက်ညိုး ထိုးပြ ပြီး “ဒကာတော် အဲ့ဒီအုတ်ပုံကို ဆွမ်းစားဆောင်နောက် အရင် ရွေ့ပေးပါအုန်း ” လို့ မိန့်တော်မူတယ်။ အဲ့တော့ လက်ပြတ် သူတောင်းစားက ဘုန်းကြီးကို မကျေမနပ်နဲ့ ပြောပါတယ်“ အရှင်ဘုရား။ တပည့်တော် မှာ လက်တစ်ဖက်တည်းရှိတာ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဒီအုပ်ပုံကို ရွေ့နိုင်မှာလဲ အရှင်ဘုရား … Read more
အချစ်ရဲ့ ဒုက္ခကို ကောင်းကောင်းကြီးသိသွားတဲ့ ဆရာမ တစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်…
သငျ့ လကျဖဝါးပွငျမှာ ဒီလို ထူးခွားတဲ့ အမှတျအသား(၉)မြိုး ထဲက တဈခုခုပါရငျ ဖတျကွညျ့ပါ…
ဆံပငျအုံ ပါးသူတှေ အတှကျ ဆံပငျပိုထူစမေယျ့ နညျးလမျးကောငျး မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ…
လှပသန်စွမ်းတဲ့ ဆံကေသာပိုင်ဆိုင်ဖို့ အမျိုးသမီးတိုင်း အိပ်မက်မက်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ သင့်ဆံပင်ဟာ တစ်လ လက်မဝက်ခန့် ကြီးထွားနေတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဆံပင်ကြီးထွားမှုနဲ့ ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံက ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းခံတွေနဲ့ ဗီဇအပါအဝင် များစွာသောအချက်တွေပေါ် မူတည်ပါတယ်။ သင့်ဆံပင်ဟာ သင့်ပုံမှန်စားသုံးတဲ့ အလေ့အကျင့်တိုင်း သန်စွမ်းမှုရှိပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပြီး မျှတတဲ့ ပုံမှန်အစားအသောက်က ရှည်လျားပြီး ပိုးသားလို နူးညံ့ပျော့ပြောင်းတဲ့ဆံကေသာအတွက် အဓိကဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးနည်းက သင့်ဆံပင်ပိုမိုထူထပ်စေမယ့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဆံပင်ပိုထူစေမယ့် ဆေးနည်း လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများ ကြက်ဆူဆီ ထမင်းစားဇွန်း (၂) ဇွန်း ကြက်ဥ အနှစ် (၁) လုံး ပျားရည် ထမင်းစားဇွန်း (၁) ဇွန်း ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံး အတူရောစပ်ပါ။ အဲဒီအရောအနှောနဲ့ ဆံပင်အမြစ်တွေ နှိပ်နယ်ပေးပြီး ကျန်တာနဲ့ ဆံပင်လိမ်းကျံပြီး ဦးထုပ် … Read more
သငျ သတိမထားမိတဲ့ ပြားစှဲ နိမိတျ အဟောမြား
ပျားစွဲနိမိတ်များ ၁။ဘယ်ဘက်လက်၌ ပျားစွဲပါက ငွေဝင်မည်။ ၂။ညာဘက်လက်၌ ပျားစွဲပါက စီးပွားပျက်မည်။ ၃။အိမ်ခေါင်မိုး၊ထုတ်တန်း၌ပျားစွဲပါကစီးပွားပျက်မည်။ ၄။ရေအိုး၌ ပျားစွဲပါက သူဌေးဖြစ်မည်။ ၅။အဝတ်ပုဆိုး၌ ပျားစွဲပါက ချမ်းသာမည် ။ ၆။အိပ်ရာအောက် ၊ သင်ဖြူးဖျာအောက်၊ ထမင်းအိုး၌ ပျားစွဲပါက ကောင်းသောနိမိတ်ဖြစ်သည်။ ၇။အထက်ဖျားဝါးပေါ်၌ ပျားစွဲပါက ရှိသမျှ စည်းစိမ်ဥစ္စာကုန်မည်။ ၈။အရှေ့မှလာပြီးပျားစွဲပါကအငြင်းအခုံ ကြုံရတတ်။ ၉။အရှေ့တောင်မှ လာပြီး ပျားစွဲပါက ငွေဝင်မည် ။ ၁၀။တောင်မှလာပြီး ပျားစွဲပါက ပျက်စီးဆုံးရှုံးမည်။ ၁၁။အနောက်မှလာပြီးပျားစွဲပါကအိမ်ထောင်ကျမည် ။ ၁၂။အနောက်မြောက်မှ လာပြီး ပျားစွဲပါက ငွေရမည်။ ၁၃။အနောက်တောင်မှ လာပြီးပျားစွဲပါက သူခိုးခိုး ခံရမည် ။ ကြိုးစားခြင်းဖြင့် အောင်မြင်ပါစေ။ Nyan Lin Htet Unicode Version ပြားစှဲနိမိတျမြား ၁။ဘယျဘကျလကျ၌ … Read more
ကွှကျနို့ လကျတှပြေ့ောကျဆေး (၅) ရကျအတှငျးလုံးဝပြောကျပါသညျ…
ကြွက်နို့ လက်တွေ့ပျောက်ဆေး (5) ရက်အတွင်းလုံးဝပျောက်ပါသည်..။ ဒီဆေးနည်းလေးကတော့ကျွန်မ မျက်မြင်ဆေးနည်းလေးဖြစ် တာကြောင့် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မမောင်လေးခြေထောက်မှာကြွက်နို့ပေါက်တာ သုံးလုံးထိဖြစ်လာပါရဲ့။ဆေးနည်းတွေစမ်းကြည့်ပေမဲ့မပျောက်ပါဘူး။ မုံထူး ကျေးရွာက ကိုညိုမောင်ပြောပြတဲ့ဆေးနည်းနဲ့သုံးရက်ပဲကြာပါတယ် ကြွက်နို့လုံးဝပျောက်သွားပါတယ်။ကိုယ်တိုင်ကြွက်နို့ပေါက်တဲ့မောင်လေးက စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့လိမ်းနည်းအဆင့်ဆင့် အပြင် ခြံထဲကဧကရာဇ်အပင် အမြစ်တို့ကိုပါ ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးလို့ သေသေချာချာတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူ့ခြေထောက်မှာကြွက်နို့ကအမာရွတ်လောက်ပဲထင်ကျန်ခဲ့ပါတော့တယ်။ ဆေးနည်းကတော့… ဆန်အနည်းငယ်ယူပါ.. ရေအနည်းငယ်ဖြင့်ဖျော်ပါ(မည်သည့်ဆန်မဆို) ဧက ရာဇ်အမြှစ်ကိုယူပြီးဆန်ဆေးရည်အနည်းငယ်ဖြင့်ခပ်ပျစ်ပျစ်သွေးလိမ်းပါ။(အနာကိုသွေးထွက်အောင်ကုတ်ဖဲ့စရာလုံးဝမလိုပါ) သနပ်ခါးလိမ်းသလို ခပ်ပျစ်ပျစ်လေးလိမ်းထားပါ။ဆေးခြောက်အောင်ထားပါ။ခြေထောက်ရေမ စိုပါစေနှင့်။ အဝတ်စည်းထားရန်မလိုပါ။တစ်နေ့ (3) ကြိမ် နံနက် နေ့လည် ည လိမ်းပေးပါ။ မှတ်ချက် မောင်လေးကတော့အလုပ်မအားလို့ တနေ့၂ ကြိမ်နံနက် ည သာလိမ်းပါသည်။ (5)ရက်လောက်နေလျှင်လုံးဝပျောက်ကင်းသွားပါမည်။ ဆေးလိမ်းနည်းအဆင့်ဆင့်ကို ပုံများတွင်လည်းရှင်းပြထားပါသည်။မုံထူးကျေးရွာမှ ကိုညိုမောင်နှင့်မောင်ကျော်ကြီးအားအထူးကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း။ ကြွက်နို့ တွေပွားပြီးသတ်မရလို့စိတ်ညစ်နေသူများအတွက်လက်တွေ့ဆေးနည်းလေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ မည်သူမဆို စိတ်ချမ်းသာစွာ ကူးယူခြင်း…မျှဝေခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်…။ #May Soe Unicode Version … Read more
အိမျတောငျလူမိုကျ_ဘူးမစိုကျနဲ့ ဆိုတဲ့ စကားပုံ၏ အဓိပ်ပါယျမှနျ…
October 9, 2020 October 7, 2020 by Online Hartha
အိမ်တောင်လူမိုက်_ဘူးမစိုက်နဲ့ ဆိုတဲ့ စကားပုံ၏ အဓိပ္ပါယ် သည်စကားပုံလေး ငယ်စဉ်ကပင် ကြားဖူးခဲ့ပါ၏။ သို့သော် ဆိုလိုရင်းကို ဝေဝါးစွာပင် …. အိမ်ထောင်ကျပြီး ဘူးစိုက်ရင် လူမိုက်လား…? လူလိမ္မာ မှ စိုက်ရမည်လား …? စသဖြင့်.. အမှတ်မထင် ဆရာကြီး(စစ်ကိုင်းဦးဖိုးသင်း)၏ ဆောင်းပါးကို ဖတ်မိ၍ ဆိုလိုရင်း အမှန်ကို သိရတော့သည် ။ ဘူးပင်ကို အိမ်ဝင်းများအတွင်း မိုးအခါ စိုက်ပျိုးတတ်သည် ။ ဆောင်းအခါတော့ ကိုင်းဘူးပေါ့ ။ မိုးတွင်း လေတိုက်ခတ်ရာ အရပ်မှာ တောင်လေ၊ အနောက်တောင်လေများ တိုက်ခတ်ပါသည် ။ ဘူးပင်သည် နေ့အခါ နိုက်ထရိုဂျင်ကို ရှူသွင်းပြီး အောက်စီဂျင်ကို ထုတ်ပါသည် ။ ည အခါတွင်မတော့ အောက်စီဂျင်ကို ရှူသွင်းပြီး ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို ထုတ်လွှတ်ပါသတဲ့ … Read more
ဆီးအရောငျက ပွောပွနတေဲ့ သငျ့ကနျြးမာရေး အခွအေနေ
ဆီးအရောင်က ပြောပြနေတဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဆီးအရောင်ကိုကြည့်ပြီး လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို အကြမ်းဖျဉ်း ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ ၁။ ကြည် လင် တဲ့ အ ရောင် ရှိ သော ဆီး – ရေကို လိုအပ်တာထက် ပိုပြီး သောက်သုံးမိနေကြောင်း ဖော်ပြပါတယ်။ ဘာအန္တရာယ်မှ မရှိပါဘူး။ ၂။ ကောက် ရိုး ရောင် မှ ပ ယင်း ရောင် ရှိ သောဆီး – အဝါရောင်ဖျော့ဖျော့ ရှိတဲ့ဆီးက ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်း ဖော်ပြနေပြီး အဝါရောင် ရင့်ရင့်ရှိတဲ့ ဆီးကတော့ ရေနှင့် အသီး အရွက်ကို ဦးစားပေး စားသင့်ကြောင်း ဖော်ပြနေပါတယ်။ ၃။ … Read more